Udedelwe ngebheyili umfundisi ‘webhanoyi’ – LIVE Express
uMqondisi wenkampani esolwa ngokuba ‘yibhanoyi’ (ponzi scheme) udedelwe ngebheyili ya-R100 000 yiNkantolo yeMatshi e-Bellville ngoLwesithathu kulandela ukuboshwa kwakhe uphiko lwama-Hawks ngamacala okuphula umthetho, i-Financial Advisory and Intermediary Services (FAIS) Act kanye ne-Bank Act.
u-Colin Davids, oneminyaka engama-48 ubudala, uphinde abe ngumfundisi webandla, i-New Direction Grace Ministries, elizinze e-Parrow, e-Cape Town.
Kusolwa ukuthi inkampani anguMqondisi wayo, i-Platinum Forex Group, ibiqhuba i-Ponzi scheme kanti iningi labantu abebetshala izimali zabo kuyo bekungabasebenzi bakahulumeni asebethathe umhlalaphansi noma asebesulile emsebenzini.
Ngo-July 2015 iNkantolo eNkulu e-Western Cape yayalela ukuba kumiswe (freeze) zonke izinto zale nkampani okuhlanganisa ne-account yasebhange nokubalelwa enanini eliyi-R100 million kulandela isicelo esafakwa u-National Director of Public Prosecutions (NDPP).
Icala la-Davids lihlehliselwe umhla ziyi-18 January 2017 ukuze kuqhutshekwe nophenyo.
Sekunxuswe amalunga omphakathi aseke aba yizisulu ze-Platinum Forex Group ukuba eze ngaphambili bese exhumana nomphenyi wecala, u-Lieutenant Colonel J Hardenberg enombolweni yocingo engu-(021) 918 3354 noma i-email ethi- HardernbergJ@saps.gov.za.